२0७७ सालमा घर निर्माण सुरु गर्ने शुभ साइतहरु – Dainik Samchar
January 24, 2021 426
घर निर्माण सुरु गर्न शुभ साइतहरु
अब घरलाई कसरी शुभलाभ मिल्ने बनाउने त ? शास्त्री भन्छन्, ‘घर निर्माणको थालनी गर्दा शुभ साइत हेरेर मात्र जग बसाल्नुपर्छ ।’ पूर्वीय दर्शनमा घर निर्माण थाल्दा र नयाँ घरमा सर्दा शुभ साइत हेर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यो स्टोरी तयार पर्दा ०७७ सालको माघ १० गते भइसकेको छ । अब ०७७ साल सकिन पनि दुई महिना २० दिनमात्र बाँकी छ । अब बाँकी अवधिमा कुन कुन दिन गृहारम्भ (घर निर्माण सुभारम्भ) गर्न सकिन्छ त ?
माघ महिनामा घर निर्माण सुरु गर्नका लागि २, ७ र २२ गते शुभ साइत रहेको छ । अब तपाईंले माघ महिनामा घर निर्माण सुरु गर्ने सोँच बनाउनु भएको छ भने २२ गते शुभारम्भ गर्दा उत्तम हुनेछ ।
यस्तै, फागुन महिनामा १०, १७ र २७ गते गृहारम्भ गर्ने शुभसाइत जुरेको छ ।
चैत महिनामा २, १८ र २० गते गृह निर्माण सुरु गर्नका लागि शुभसाइत रहेको छ ।
Prevकान्छी भित्राउन नदिदा श्रीमानले लिए श्रीमतीको ज्या’न, केटी देख्नै नहुने श्रीमती बनाउनै पर्ने (भिडियोसहित)
Nextहेर्नुहोस् यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
पुन्य गौतमले, बालेन शाह अमिरिकन एजेन्ट भएको खुलासा गरे, देखाए यस्तो प्रमाण (भिडियो सहित) (7219)